Ndị Kraịst Merala Agadi Jehova Ji Ozi Unu Na-ejere Ya Kpọrọ Ihe
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Septemba 2018
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guadeloupean Creole Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kekchi Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
N’ỤWA niile, ndị okenye ji ozi ha na-ejere ụmụnna ha kpọrọ ihe. Obi na-atọ anyị ụtọ maka ndị okenye Jehova nyere anyị. Ma n’oge na-adịbeghị anya, e nwere mgbanwe e mere ná nzukọ Jehova. A gwara ndị okenye merela agadi ka ha nyefee ndị okenye na-akatabeghị ahụ́ ụfọdụ nnukwu ọrụ ha na-arụ. Olee otú ha ga-esi eme ya?
Mgbanwe a e mere bụ na ndị nlekọta sekit ga-akwụsị ịrụ ọrụ ka ndị nlekọta sekit mgbe ha ruru afọ iri asaa, ma ndị nke na-akụzi ihe n’ụlọ akwụkwọ òtù na-achị isi na-ahazi. E kwukwara ka ndị okenye ruru afọ iri asatọ nyefee ndị okenye na-akatabeghị ahụ́ ụfọdụ ọrụ ha na-arụ ná nzukọ Jehova. Ọrụ ndị dị ka ịbụ onye na-ahaziri Kọmitii Alaka ọrụ ma ọ bụ onye na-ahaziri ndị okenye ọrụ n’ọgbakọ. Olee ihe ndị okenye ndị a merela agadi anyị hụrụ n’anya mere banyere mgbanwe ndị a? Ha rubeere Jehova na nzukọ ya isi.
Otu nwanna aha ya bụ Ken, onye jerela ozi ka onye na-ahaziri Kọmitii Alaka ọrụ ruo ihe fọrọ obere ka o ruo afọ iri anọ na itoolu, kwuru otú obi dị ya. Ọ sịrị: “M ji obi m niile nabata mgbanwe a. Nke bụ́ eziokwu bụ na n’ụtụtụ ahụ m matara, ebula m ụzọ gwa Jehova na anyị kwesịrị inwe nwanna nwoke na-akatabeghị ahụ́ ga-abụ onye na-ahaziri Kọmitii Alaka anyị ọrụ.” Ihe a nwanna a kwuru ka ọtụtụ ndị okenye merela agadi n’ụwa niile kwuru. Ma, ebe ọ bụ na ozi ha na-ejere ụmụnna ha na-atọ ha ụtọ, mgbanwe a e mere wutere ha ná mmalite.
Otu nwanna na-ahaziri ndị okenye ọrụ aha ya bụ Esperandio kwuru na o wutetụrụ ya. N’agbanyeghị ya, ọ sịrị: “M chọkwuru oge m ga-eji na-elebara onwe m anya n’ihi na ọrịa m na-aka njọ.” Nwanna Esperandio ka ji obi ya niile na-ejere Jehova ozi ma na-enyekwara ọgbakọ ha aka.
Oleekwanụ banyere ndị nlekọta sekit jerela ozi ọtụtụ afọ ma ugbu a ha na-ejezi ozi ndị ọzọ e nwere ná nzukọ Jehova? Nwanna Allan, onye bụ́ onye nlekọta sekit ruo afọ iri atọ na asatọ kwuru, sị: “O riri m ọnụ mgbe m matara.” Ma, ọ ghọtara na ọ bara uru ka e nye ụmụnna na-akatabeghị ahụ́ ọzụzụ ka ha rụwa ọrụ a. Nwanna a ka ji obi ya niile na-ejere Jehova ozi.
Nwanna Russell, bụ́ onye rụrụ ma ọrụ sekit ma ịkụzi ihe n’ụlọ akwụkwọ òtù na-achị isi na-ahazi ruo afọ iri anọ, kwuru na o wutere ya na nwunye ya ná mmalite. Ọ sịrị: “Ozi anyị na-eje na-atọ anyị ụtọ nke ukwuu, anyị chekwara na ike agwụbeghị anyị n’ọrụ a.” Nwanna a na nwunye ya ji ihe ndị ha mụtara mgbe ha na-eje ozi na-enyere ọgbakọ ha aka, obi na-atọkwa ụmụnna ha na ha nọ n’ọgbakọ ụtọ.
Ọ bụrụgodị na ọ dịtụbeghị gị otú ahụ ọ dị ụmụnna ndị a, ihe e kwuru na Samuel nke abụọ nwere ike inyere gị aka ịghọta otú obi dị ụmụnna ndị ahụ.
NWOKE DỊ UMEALA N’OBI MA MARA IHE Ọ GA-EMELI
Cheta ihe mere mgbe Absalọm nwa Eze Devid chọrọ ịkwatu ya n’ọchịchị. Devid si Jeruselem gbaga Mahaneyim, nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan. N’oge ahụ, ihe ndị e ji enyere ndụ aka dị Devid na ndị ya na ha so gbapụ ezigbo mkpa. Ì chetara ihe merenụ?
Mmadụ atọ bi ebe ahụ wetaara ha àkwà, ụdị nri dị iche iche, nakwa arịa ndị ọzọ. Otu n’ime ndị a wetaara Devid ihe bụ Bazilai. (2 Sam. 17:​27-29) Ozugbo nkata ahụ Absalọm kpara kụrụ afọ n’ala, Devid laghachiwara Jeruselem, Bazilai dukwa ya ruo Jọdan. Devid gwara ya ka o soro ya gaa biri na Jeruselem. Ọ gwakwara Bazilai na ya ga na-enye ya nri. Ma, Bazilaị bụ “nnukwu mmadụ,” nri ndị ahụ Devid chọrọ inye ya adịghị ya mkpa. (2 Sam. 19:​31-33) Ọ ga-abụ na àgwà Bazilaị nwere masịrị Devid, nakwa na aro ọ bụla o nwere ike ịtụrụ ya ga-abara ya uru. Ọ gaara amagbu onwe ya ma Bazilai biri n’obí eze ma na-arụ ọrụ n’ebe ahụ.
Ebe ọ bụ na Bazilai dị umeala n’obi ma mara ihe ndị ọ ga-emeli, o kwuru na ya dị afọ iri asatọ. O kwukwara, sị: “M̀ pụrụ ịma ihe dị iche n’ihe ọma na ihe ọjọọ?” Gịnị ka ihe a o kwuru pụtara? Ọ ga-abụ na o nwetala amamihe n’ogologo oge o birila ndụ. Ọ ka nwekwara ike inye ezigbo ndụmọdụ otú ahụ “ndị okenye” mechara nye Eze Rehoboam. (1 Eze 12:​6, 7; Ọma 92:​12-14; Ilu 16:31) N’ihi ya, ihe mere Bazilai ji kwuo gbasara ịma ihe dị iche n’ihe ọma na ihe ọjọọ nwere ike ịbụ n’ihi nsogbu ndị nká kpataara ya. O kwuru na nká emeela ka ya ghara ịna-anụcha ihe na ịna-anụcha ụtọ ihe. (Ekli. 12:​4, 5) N’ihi ya, ọ gwara Devid ka ọ kpọrọ nwa okorobịa aha ya bụ Kimham gaa Jeruselem. O nwere ike ịbụ na Kimham bụ nwa ya.​—⁠2 Sam. 19:​35-40.
ỊKWADEBE MAKA ỌDỊNIHU
Mgbanwe ahụ nzukọ Jehova mere n’ihi afọ ndụ yiri ihe ahụ Bazilai mere. O doro anya na n’oge anyị a, ihe e kwesịrị ịtụle abụghị naanị ọnọdụ mmadụ na ihe onye ahụ nwere ike imeli otú ahụ Bazilai mere. E kwesịrị ịtụle ihe ga-akacha baara ndị okenye ji obi ha niile eje ozi n’ụwa niile uru.
Ndị okenye ndị a merela agadi ma dịrị umeala n’obi ghọtara na ha nyefee ụmụnna ndị na-akatabeghị ahụ́ ọrụ ndị ahụ ha rụrụla ọtụtụ afọ, nzukọ Jehova ga-esikwu ike maka ọtụtụ ndị ga-abata na ya n’ọdịnihu. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ ụmụnna ndị a merela agadi zụrụ ndị a na-akatabeghị ahụ́, otú ahụ ọ ga-abụ na Bazilai zụrụ nwa ya nwoke nakwa otú ahụ Pọl onyeozi zụrụ Timoti. (1 Kọr. 4:17; Fil. 2:​20-22) Ụmụnna ndị a na-akatabeghị ahụ́ egosila na ha bụzi “onyinye n’ụdị mmadụ,” ndị na-enye aka ‘ewuli ahụ́ nke Kraịst elu.’​—⁠Efe. 4:​8-12; tụlee Ọnụ Ọgụgụ 11:​16, 17, 29.
Nyere Ụmụ Okorobịa Aka Ka Ha Na-emekwu nke Ọma n’Ọgbakọ
Na-agba ha ume ka ha kpebie ihe ndị ha chọrọ ime n’ofufe Chineke, na-enyekwara ha aka ime ihe ndị ahụ.
Na-aja ha mma n’ihi na mma Onye Kraịst merela agadi jara ha na-agba ha ume, na-emekwa ka obi sie ha ike.
Na-azụ ha ka ha jiri Okwu Chineke na ihe nzukọ Jehova na-akụziri anyị na-ekpebi ihe ndị ha chọrọ ime.
ỤZỌ DỊ ICHE ICHE ANYỊ GA-ESI ENYE AKA
Ọtụtụ ụmụnna nọ n’ọgbakọ dị iche iche n’ụwa niile, bụ́ ndị nyeferela ọrụ ụfọdụ ha na-arụ ejirila ohere ahụ na-arụ ọrụ ndị ọzọ e nwere ná nzukọ Jehova.
Otu nwanna aha ya bụ Marco rụrụla ọrụ sekit afọ iri na itoolu kwuru, sị: “N’ọgbakọ anyị, e nwere ụmụnna nwaanyị di ha na-anọghị n’ọgbakọ. Ihe anyị na-eme ugbu a bụ inyere ndị di ha aka.”
Nwanna aha ya bụ Geraldo rụrụ ọrụ sekit ruo afọ iri abụọ na asatọ. O kwuru, sị: “Ihe ụfọdụ anyị na-eme ugbu a bụ inyere ndị na-anaghị ejekwa ozi aka nakwa iduzi ọtụtụ ọmụmụ Baịbụl.” O kwukwara na ka ọ dị ugbu a, na ya na nwunye ya na-eduziri mmadụ iri na ise ọmụmụ Baịbụl, nakwa na ọtụtụ ndị na-anaghị ejekwa ozi na-abịazi ọmụmụ ihe.
Nwanna Allan anyị kwurula banyere ya kwukwara, sị: “Ugbu a, anyị na-ejizi oge buru ibu ekwusa ozi ọma. Ozi ọma anyị na-ezi n’ebe ọhaneze na-anọ, n’ebe a na-azụ ahịa, nakwa ndị agbata obi anyị na-atọ anyị ụtọ. Mmadụ abụọ n’ime ndị agbata obi anyị abịala ọmụmụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze.”
Ọ bụrụ na i so n’ụmụnna ndị ahụ merela agadi na-arụzi ọrụ ndị ọzọ e nwere ná nzukọ Jehova, e nwere ụzọ ọzọ pụrụ iche i nwere ike isi na-enyekwa aka n’ọgbakọ. Otú ị ga-esi eme ya bụ iji ihe ndị ị ma na-azụ ụmụ okorobịa nọ n’ọgbakọ. Nwanna Russell anyị kwuburu banyere ya sịrị: “Jehova na-azụ ezigbo ụmụ okorobịa ụbụrụ na-aghọ nkọ ma na-eji ha arụ ọrụ n’ọgbakọ. Ụmụnna anyị na-erite uru n’otú ha si eji ịnụ ọkụ n’obi na-ezi ihe ma na-eleta ụmụnna ha.”​—⁠Gụọ igbe isiokwu ya bụ “ Nyere Ụmụ Okorobịa Aka Ka Ha Na-emekwu nke Ọma n’Ọgbakọ.”
Olee ụzọ ụmụnna ndị merela agadi si na-enyere ụmụnna ha aka?
Ha na-enyere di ma ọ bụ nwunye na-anọghị n’ọgbakọ aka
Ha na-enyere ndị na-anaghị ejekwa ozi aka, na-eduzikwa ọmụmụ Baịbụl
Ha na-ewepụtakwu oge eje ozi
JEHOVA EJIGHỊ OZI UNU JI OBI UNU NIILE NA-EJE EGWU EGWU
Ọ bụrụ na ọ dịbeghị anya ị malitere ịrụ ọrụ ndị ọzọ a na-arụ ná nzukọ Jehova, ike agwụla gị. I nyerela ọtụtụ ụmụnna aka n’ozi i ji obi gị niile jeere Jehova ma nọgide na-ejere ya. Ụmụnna gị hụrụ gị n’anya, nọgidekwa na-ahụ gị n’anya.
Ihe ọzọ ka mkpa bụ na ọrụ unu rụrụ ga-adịgide n’obi Jehova. Ọ gaghị ‘echefu ọrụ unu na ịhụnanya unu gosiri maka aha ya, ebe unu jewooro ndị nsọ ozi ma ka na-eje ozi.’ (Hib. 6:10) Ihe a Baịbụl kwuru na-eme ka obi sie anyị ike na ọ bụghị naanị ozi anyị jere n’oge gara aga ka Chineke ga-echeta. Unu dị oké ọnụ ahịa n’anya Jehova. Ọ gaghị echefu ozi unu jeere ya n’oge gara aga, nakwa nke unu ka na-ejere ya iji mee ihe dị ya mma.
Ọ bụrụkwanụ na a gbanwebeghịrị gị ọrụ otú ahụ a gbanweere ụmụnna ndị ahụ anyị kwuru banyere ha? Okwu a nwekwara ike ịgbasa gị. Olee otú o nwere ike isi agbasa gị?
E nwee nwanna merela agadi a gbanwerela ọrụ, ya abụrụ na gị na ya na-emekọrịta ihe ugbu a, ihe ndị ọ mụtara n’ọtụtụ afọ o jerela Jehova ozi nwekwara ike ịbara gị uru. Gwa ya ka o nye gị ndụmọdụ nakwa ka ọ tụọrọ gị aro. Leruo anya ka ị mata otú o si eji ihe ndị ahụ ọ mụtara na-arụ ọrụ ya ugbu a.
Ma ì so n’ụmụnna ndị a merela agadi a gbanweere ọrụ, ma ị̀ bụ nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị nwere ike ịmụta ihe n’aka ndị agadi, cheta na Jehova anaghị eji ozi ụmụnna jeere ya ọtụtụ afọ ma nọgide na-ejere ya egwu egwu.
‘Unu Maara Ihe Ndị A, Unu Ga-enwe Obi Ụtọ ma Unu Na-eme Ha’
Na-ahụ Ndị Ọzọ n’Anya n’Ihi na Ọ Na-ewuli Ha Elu
Obi Ụtọ Na-adịrị Ndị Na-efe “Chineke Bụ́ Onye Obi Ụtọ”
Ị̀ Ma Ihe Na-akụnụ?
Onye Pụrụ Ime Ihe Niile nke Na-echebara Ndị Ọzọ Echiche
Dịrị Obiọma ma Na-echebara Ndị Ọzọ Echiche Ka Jehova
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Septemba 2018
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Septemba 2018